मान्छे खाने बाघलाई हात्तिको सहयोगले समात्यो प्रहरिले हेर्नुहोस पुरा भिडियो । Bardiya news – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/मान्छे खाने बाघलाई हात्तिको सहयोगले समात्यो प्रहरिले हेर्नुहोस पुरा भिडियो । Bardiya news
मान्छे खाने बाघलाई हात्तिको सहयोगले समात्यो प्रहरिले हेर्नुहोस पुरा भिडियो । Bardiya news
Breaking – अन्तत : राजधानीमा क’र्फ्यू नै लगाउने निर्णय ! कहिलेदेखि लागू हुने ?
के’टी’को घ’रमै पु’गे’र हे’र्नु’स्…अ’नि’शा’ले झु’ट बो’लेप’छि का’ठमा’डौंबाट आ’ईन बि’हे ग’राउ’ने ठु’लो म’मि मि’डिया’मा
आ’त्तिदै अस्पतालमा भेट्न पुगेका प्रचण्डलाई चिकित्कसले पत्नी सीताको स्वास्थ्यवारे दिए यस्तो जानकारी,